कस्तो सेयर किन्ने ? कसरी छान्ने ? - Tamang Online
काठमाडौं – कम्पनीमा रहेको कूल पूँजीको विभाजीत इकाइको दस्तावेजलाई शेयर भनिन्छ । अथवा कम्पनीको पूँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरी लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गरिने स्वामित्वको इकाइ शेयर हो ।
आवेदन गरेको शेयरको बाँडफाँट निष्कासित शेयरको आधारमा हुने गर्दछ । शेयर बाँडफाँट भएपछि लगानीकर्ताले कति शेयर पाए भन्ने यकिन हुन्छ । पाएको शेयरको प्रमाणपत्र र माग गरेर पनि नपाएको शेयरको रकम फिर्ता भने सङ्कलन केन्द्र वा विक्री प्रबन्धकबाटै पाउन सकिन्छ ।
« पोर्तुगलमा सोनाम ल्होछार भव्यताको साथ मनाउने तयारी (Previous News)
(Next News) जेरुसलेम किन महत्वपूर्ण छ ? »